Umatshini wokugaya we-Universal, Nkqo, Tye, Umthengisi wase China abaThengisi
Ulapha: Ekhaya1 / China Milo mveliso kunye nabenzi
EPHAKAMILEYO Precision UNIVERSAL WOKUGQIBELA KOMATSHINI METAL ukusika
I-Tsinfa ngumthengisi oqeqeshiweyo kunye nomvelisi wezixhobo zomatshini e-China. Olu luhlu loomatshini bokugaya bayimodeli yezixhobo zemishini emininzi, kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu kakhulu. Ukusebenza kokulungiswa kwesinyithi kuphezulu kakhulu.
Ukusuka kwindawo yexabiso, xa uthenga lo mshini wokugaya, ulingana nokuthengwa kweentlobo ezi-4 zomatshini wokugaya: umatshini wokugaya othe nkqo, umatshini wokugaya othe tyaba, umatshini wokugaya wenkunzi yegusha, umatshini wokugaya intloko ojikeleza iswivel iidigri ezingama-360, ukunciphisa ngokukuko iindleko zokuthengwa kwempahla ngokwendlela yokusebenza, xa kuthelekiswa noomatshini bokugaya abaqhelekileyo, olu ngcelele loomatshini bokugaya jikelele banobungqongqo kunye nozinzo, ukusika ngakumbi.
Umshini wokugaya Universal sisixhobo umatshini ne mgawuli mgawuli inkqubo wokugaya. Yokuluka uqhuba mgawuli mgawuli ukuba ujikeleze, kwaye iqhosha lemenyu iqhosha lemoto uqhuba worktable ukuhamba ekhohlo nasekunene, phezulu nasezantsi, ukuqhuba imilo efunekayo. Uluhlu lokugaya umatshini lubanzi kakhulu, lunokuqhubekisa inqwelomoya, indawo ethe nkqo, isitshixo, i-T-groove, indawo yokujikeleza, izixhobo, istft shaft, i-sprocket, umphezulu wokujikeleza njalo njalo. Ngokusebenzisa intloko yokugaya rotary, engile machining multi kunokwenziwa. Xa bar yokugaya mgawuli mgawuli ifakiwe kwi shaft engundoqo, yokugaya tyaba nako ukuqhutywa, kwaye ezininzi wabona blade mgawuli mgawuli kungenziwa ukubambeka ngaxeshanye. Isebenza kakuhle.
Umatshini wokugaya wempahla yonke uyathengiswa, umfanekiso, imigaqo:
Ubungakanani betafile （mm）: 1500 * 360
Ukuhamba kwetafile: 900 * 320 * 450
Ukuhamba kwetafile: 900 * 300 * 390
Ukuhamba kwetafile: 800 * 310 * 420
Umshini wokugaya Universal WN736D
Ubungakanani betafile (mm): 2000 * 400
Ukuhamba kwetafile: 1200 * 315 * 385
Imoto ephambili (kw): 11kw
Umatshini wokugaya we-XN26
Ubungakanani betafile (mm): 1200 * 280
Ukuhamba kwetafile: 650 * 200 * 450
Ubungakanani betafile (mm): 1500 * 320
Ukuhamba kwetafile: 800 * 300 * 450
Nkqo Milling Machine
Ubungakanani betafile (mm): 1270 * 254
Ukuhamba kwetafile ye-X / Y / Z (mm): 700 * 400 * 500
I-angle ejikelezayo kwintloko ejikelezayo: ± 45 °
Taper yokuluka: R8
Ukuhamba kwetafile ye-X / Y / Z (mm): 900 * 300 * 350
Taper yokuluka: NT40
Phawu umshini wokugaya universal:
Intloko yokugaya iyakwazi ukujikeleza iidigri ezingama-360
Wokugaya intloko iye ngqongqo olomeleleyo kunye nozinzo elungileyo
Ii-axis ezimbini zokusika ngoomatshini, ukutya okuzenzekelayo
Z-axis lift yombane
Izixhobo ezikhethiweyo: intloko yesalathiso sendalo, itafile ejikelezayo, umboniso wedijithali (i-DRO), intonga yokugaya ethe tyaba
Ukwahlula intloko kunye ne-X axis lead screw kungakuqonda ukudibana, ukwenza iscrew machining
Yintoni umshini wokugaya iphela? Iinxalenye, Ulwakhiwo:
2 Isondo lesandla
3 Ibhentshi yomsebenzi
4 Intloko yokugaya ejikelezayo
5 othini tyaba
Isiphatho sokutshintsha kwesantya
Ikholamu emi nkqo
Inkqubo yokugaya umatshini Universal, ulawulo lomgangatho,
1.Ngokusebenzisa isoftware-ntathu uhlalutyo lwesici esilinganiselweyo, ulwakhiwo lwezixhobo luyajongwa kwaye lulungiselelwe ukuqinisekisa uzinzo lolwakhiwo lwezixhobo.
Unyango lokuguga lwenziwa ukuphelisa uxinzelelo lwangaphakathi kunye nokuphucula uzinzo
Ukugaya iinxalenye, ukukruqula umatshini okruqulayo, ukugaya inqwelomoya esebenzayo ngomatshini wokugaya we-gantry, ukukrwela kunye nokusila umphezulu odibeneyo wesixhobo somatshini ngesandla, kwaye ujonge umgangatho wezinto ezithengiweyo.
4.Hlanganisa ngokwenkqubo yokufaka umzobo, kwaye ulinganise ukuchaneka ngezixhobo zokulinganisa
5.Linking izixhobo zombane kunye namaqhosha okusebenza,
Emva kokugqitywa kovavanyo lokusika, kunye nomlinganiso wokuchaneka komatshini uphela
Indlela yokusebenza umatshini wokugaya iphela
Qinisekisa ukuba isiseko sesixhobo somatshini sizinzile kwaye sikumgangatho. Jonga ukuba ngaba umbane kunye nombane ophambili wombane womdlalo wezixhobo, kwaye uqhagamshele umbane.
Jonga ukuba iindawo zokuthambisa zithanjisiwe na ngokomzobo we-lubrication kunye namanqaku kwisixhobo somatshini
Faka isixhobo kwaye uhlengahlengise ngesandla indawo yokusebenza, Jikelezisa intloko yokugaya kwi-engile efunekayo. Itheyibhile yokubala ye-angle ingabhekisela kwincwadana.
Inkqubo yokuhanjiswa kwe-spindle inenkunzi yegusha. Ngasekhohlo okanye ngasekunene kwenkunzi yegusha, kukho iindlela ezintathu zokutshintsha. Ukutshintsha isantya, hlengisa ii-levers shift ukuze ufumane isantya sokushiya esahlukileyo. Qaphela: isantya kufuneka sitshintshwe xa umatshini umisiwe.
Kwindawo yokugaya ethe tyaba, faka umsiki kwindawo yokuluka ethe tyaba. Lo matshini ikwaxhotyiswe ngetreyini yokugaya ethe tyaba kunye ne-cutter bar yokuqonda imisebenzi eyahlukeneyo yokugaya.
Ekugayeni, zama ukunciphisa ukuxhoma i-extrusion yenkunzi yegusha kunye nokusika. Xa usila emva kokuhlengahlengisa indawo, bamba ngokuqinileyo zonke iipere ezihambayo ezinganyanzelekanga ukuba zihambe (njengenkunzi yegusha, ulwalathiso olude kunye nolwalathiso olunqamlezileyo) ukuphucula ukuqina komatshini. Umkhosi wokubamba akufuneki ube mkhulu kakhulu ukunqanda ukubola.
Umatshini unesitishi seqhosha elikhanyayo. Ixhotyiswe ngeqhosha likaxakeka, elinokucinezelwa phantsi kwangoko xa kuvela imeko engaqhelekanga. Kukwakho nesixhobo sokuvula ukuqala kwamandla. Emva kokujongana neengxaki, ukuqala kwakhona, qala ujike iqhosha lexesha likaxakeka kwikona ukuze usete kwakhona, emva koko ucinezele iswitshi yamandla ukuqala umatshini.